जय श्री स्वस्थानि माता कि - अथ तृतीय ध्याय | Ekhabar Nepal
कुमार जी आज्ञा गर्नु हुन्छ हे अगस्त्य मुनि !
अस्ट प्रजपतिमा सबैभन्दा जेठो दछ्प्रजपति थिए तिनकी बिरानी नाम कि साध्वी स्त्री थिन। उनले दस्मास पूर्ण भयपछी पुत्री जन्माईन कस्ती कन्या भने हजार सुर्य जस्तो तेज भएकि बस्तीस लाछ्न भए कि पधपत्र जस्तो नेत्र भएकी हात्तीका जस्तो हात भएकि कदली स्थम्भ जस्तो तिग्रा भएकि यस्ती कन्या देखि सबैलाई बोलाई दछ प्रजापतिले न्यारान गर्यो । सबै ऋषि ज्योतिषीले गणना गरि सतिदेबी नाम राखे । हे मुने यो कुरा लामो छ तर म सम्छेप्म भन्दछु , तेस्पची बिरनीका क्रमैले तेतिस कोटी कन्या जन्मिय सबैलाई दम्पतीले सक्ने रुपमा पालन गरे ।
अनि अगस्त्य मुनि ले सोधे हे कुमार ति कन्या हरुको बिबाह तेतिस्कोटि देवता हरुसगा कसरि भयो ? तेयो पनि सुन्ने इच्छा छ । तेती सुनी कुमार आज्ञा गर्दछन हे अगस्त्य मुनि एकदिन स्वग क देवता जम्मा भै सभा गरे हाम्रो स्त्री छैनन् दछ प्रजापतिका तेतिसकोटि कम्न्य बिबाह गरौ कन्या मग्न नारद मुनि लाई जाउ भने यसरि नारद मुनि गए उनि आयको देखि दछ प्रजापतिले सक्दो सिस्त्चार ले स्वागत गरि क कमले पाल्नुभो भनि आज्ञा गरे । आफुलाई देवता हरुले तिम्लाई तेतिसकोटि कन्या मग्न पठाएका भनि बिन्ति गरे नारदजीका कुरा सुनी खुसि भै तेतिस् कोटी कन्या देवतालाई दिने बाचा गरे ।
यौटी सतीदेवी मात्र दिने छैन किनकी मेरो पुत्र छैन सम्पतिको रछा कसले गर्ला बाकी तिमि जहिले भंचौव जस जसलाई दिने भन्छौ उसैलाई दिने छु । अब यहाँ बाट गइ बिबाहको दिन जुराई पठाउन लगाउ भनि अनेक उपचार पूजा गरे । नारद त्यहाँ बाट बिदा भइ देवता को मा गए नारद आएको देखि क भो भनि देवता हरुले क भयो भनि सोधे नारदले सतीदेवी बाहेक सबै कन्या दिन्छु भनेको कुरा सुनाए ।
अनि देबताहरुले धन्ने नारद मुनि भन्दै बिबाहको दिन जुराई पठाए । तेस्पछी बिबाहको सामग्री जुटाई कन्या दान लिन गए । उनले देबताहरु आएको देखेर आनन्द मान्दै मगल यात्रा गर्दै सतीदेवी बाहेक तेतिसकोटि कन्यालाई नारद जिको आज्ञा अनुसार कन्यादान दिए । र देवता हरु आ आफ्नो स्त्री लिएर आफ्नो आश्रम तिर लागे । यो कुरा कैलास पर्बत मा रहेका शिवजीलाई थाहा पाएर मलाई नसोधी आफु आफुले कन्यादान लिए छन् कैलास को स्वामी भयर पनि मेरा स्त्री छैनन् अबमलाई कसले स्त्री देलान भनि हेर्दा सतीदेवी बाकीनै रहिछिन । देवता हरुले मेरो मर्यादा राखेका रहेछन ठानी टि कन्या माग्न आफै गए । महादेव आएको परे बाट दछ ले देखि तेयो आयको महादेव हो क भन्न आयोको भनि बिरानी सित कुरागर्दै गर्दा घरमुनि पुगेर महादेवले बोलाउनु भयो । दछ ले झाय्ल बाट हेरी माथि आइजा भनि डाके र सोधे हे महादेव आज त मेरो घरमा के कमले आइस ? भनि हेला गरेर बोले ।
अनि महादेव भन्नुहुन्छ हे दछ्प्रजपति ! तिमीले कृपा गर्नाले तितेसकोटि देवताले कन्या पाएर उदार भए अब सतीदेवी रहेछिन मा योग्य पनि छु ति कन्या मलाई कृपा गर । महादेवको यस्तो कुरा सुन्नासाथ रिसाइ नाना थरीले गाली गरि जा मेरो घरमा नबस भनि पाखुरामा समाती धपाय । यस्तो निन्दा गरेको देखेर महादेवले भने दिन्न भनेको भए हुनेथियो यस्तो निन्दा गर्ने काम्ने थिएन भने । अब कहाँ जाउ कसलाई भन्नु कसले मलाई परिदेला सोच्दा बिस्नुको बैकुण्ठ धाममा पुग्नु भयो शंकर जी आयको देखि स्वागत गरि के कामले पाल्नु भयो भनि बिन्ति गरे अनि महादेवले दछ को घरमा गयको कुरा सुनाए । मेरो स्त्रिपनि छैनन् अब जसरि पनि टि कन्या मलाई पारिदिनु भनि तेही कम गर भनि भन्नुभयो । महादेव को बचन सुनी बिस्नुले भन्नु भयो हे – ईश्वर यो कम मा पार लगाउला मा न आउन्जेल हजुर यहाँनै बस्नु भनि दछ्को घरमा महादेवलाई प्रखाई आफु जानु भयो ।
बिस्नु आयको देखि दछ्ले आदर पुबक बसाली हे – बिस्बू आज मेरो घरमा क कम ले पाल्नु भयो आज्ञा होस् भनि सोधेपछि बिस्नुले आज्ञा गर्नु भयो । हे दछ प्रजापति केहि मग्न आएको हु दिने भय मात्र माग्दछु भने पछी हे बिस्नु तिमीले मागेपछि जे बस्तुपनि दिनेछु क चाहियो आज्ञा गर त्यति सुने पछी बिस्नुले मा बैकुण्ठ अधिपति भएर पनि मेरा स्त्री छैनन् तिम्रो कृपाले तेतिसकोटि देवता पनि उदार भए अब सतीदेवी मलाई कृपा गर बिस्नुको यस्तो बचन सुनी दछ चिन्तिज हुदै भने हे- बिस्नु मेरा पुत्र नहुनाले सम्पतिको रछा गर्न राखेको हु दिनुत उचित थियन तर बाचा गरेको हुनाले दिन कर लग्यो ति कन्या तिम्री भइन अब सुदिन जुराई कन्यादान लेउ यातिकुरा सुनी बिस्नु हुन्छ भनि बैकुण्ठ लागे । बिस्नु आएको देखि महादेवले सोध्नु भयो । हे – बिस्नु तिमि गयको कम क भयो ? अनि बिस्नुले उतर दिए – हे इश्वर मा गयको कम पुरा होला जस्तो भयो तर आफैलाई भनि मागेर आयको छु हजुर सन्यासीको रुप धारण गरि कन्यादान दिने ठाउँ मा आइ भिछा माग्नु र मलाई भिछा नदिए कन्यादान दिए लिने दिने लाई सराप दिने छु भन्नुहोला । अनि म कन्यादान दिया पछी दिनेछु यहाँ आएर बस भनि आफु बसेको छेउमा बसाली रखनेछु कन्यादान दिदा आखा छली सतीदेवीको हात हजुरको हातमा पारिदिने छु । यस दिन यो बेला आउनु होला भनोई दछ साग भएका कुरा सुबौनुभयो । बिस्नुका कुरा सुनी महादेव खुसि भै अबस्य आउने छु भनि कैलाशमा जानु भयो ।
इति श्री स्क्न्दपुराने केदारखण्ड माघमहत्म्ये कुमारअगस्त्यसम्बदे श्रीस्वोस्तानी ब्रत्कथाया दछ्कन्याबिबाहबणननाम द्रितियोध्यय: